Inkcazo kunye neMimiselo ye-Red Herrings kwi-Logic
Ngengqiqo kunye neengqinamba , i- shering ebomvu yimbonakalo ebonisa ingqalelo kwimiba ephambili kwimpikiswano okanye kwingxoxo; engacwangciswanga ngokungafanelekileyo. Kwakhona kuthiwa yi- decoy .
Kwiintlobo ezithile zeengcamango (ngokukodwa kwimibali engafihliweyo kunye neengcali), abalobi basebenzise ngamabomu izixhobo ezibomvu njengesixhobo sokuceba ukudukisa abafundi ( imifanekiso , "ukuphosa isiphunga") ukuze kugcinwe umdla kwaye kuvelise ukugxeka.
Ixesha elibomvu lokurhoxisa (i- idiom ) ekuthiwa ivela kwindlela yokuphazamisa izinja eziphazamisayo ngokukhupha i-dog, i-cured-cured herring yonqumla kwinqanawa ababeyifunayo.
Ukurhweba obomvu kukungcaciso okanye ukufakwa kwintetho, kungenjongo okanye ngokungazi, oko kukuphazamisa ingxoxo. Ukufakela okubomvu akusoloko kungabalulekanga kwaye kudlalwa ngumoya. Abathathi-nxaxheba kwingxoxo bahamba emva kokubamba obomvu kwaye bakhohlwe oko bakuqala ukuthetha ngako; Enyanisweni, abanakho ukubuyela kwisihloko sabo sokuqala. "
(URobert J. Gula, i- Nonsense: i-Red Herrings, i-Straw Men kunye neenkomo ezingcwele: Indlela esinokuhlukumeza ngayo uLwimi kwiLwimi lethu lemihla ngemihla . Axios, 2007)
"Abanye abahlalutyi banokuze bazibuze ukuba ukugqithiswa kokusetyenziswa kwimihlaba ephuhlisayo kuya kuqhubeka nokunyanzelisa amaxabiso okutya." UPaul Ashworth, uqoqosho oluphezulu lwezoqoqosho kwi-Capital Economics, ubiza loo ngxabano ngokuthi 'utywala obomvu ,' uthi ukusetyenziswa kwenyama eChina naseNdiya fi kelele kwi plateau. "
(UPhatrick Falby, "Uqoqosho: Utyhafu malunga nokutya okuninzi kunye neoli?" Newsweek , Dec. 31, 2007-Jan 7, 2008)
I-Alastair Campbell's Red Herring
"Inkokhelo apho kuhlawulwa khona iitaliti. Ngethuba leentsuku ezimbalwa, u-Alastair Campbell uye wakwazi ukuchasana malunga nendlela uhulumeni abonise ngayo ityala lakhe e-Iraq ibe yimpikiswano eyahlukileyo ngokuphathelele indlela i-BBC eyayikujonga ngayo kwi-Whitehall ngelo xesha. Njengengqungquthela yolawulo lweendaba, lenziwe ngokugqithiseleyo. Iinqweba ziye kuMnu Campbell ngendlela ayeyidle ngayo inkohliso. Kulula ukucinga, kwiminyaka ezayo, njani isizukulwana esitsha somqeqeshi ukugqithwa koogqirha kuya kuphakanyiswa kwimeko yokufunda indlela inkosi eyayikwazi ngayo ukuphosakela abo bahluphayo ngempumelelo.
"Okubalulekileyo okanye kungenjalo, yintoni uMnu. Campbell oye waphumelela ngokukodwa ukusetyenziswa kwe-classic ye- hering ebomvu kakhulu . Ukubika kwe-BBC, nangona kubalulekile, akunjalo ngokwenene; Akukho kubomvu okuluhlaza phakathi kweebomvu ukuxubusha ngamabali amancinci athile afanelekileyo; nokuba umthombo wakho ulungile, ngoko ibali libuyele. "
("Imfazwe ye-Phoney War," i -Guardian [UK], ngoJuni 28, 2003)
I-Red Herrings kwiHenning Mankell Intsha yamNandi
"'Kukho into ephazamisayo,' [uMongameli weClerk] wathi: 'Masicinge ukuba kukho izibonda ezibomvu ezibekwe kwiindawo ezifanelekileyo. Masicabangele iiseti ezimbini ezahlukeneyo. Umongameli, ngubani na umntu ochaphazelekayo. Andiyifaki into yokuba uMandela nguye ngokwenene le mihla emva koko, ndifuna ukuba ucinge ngokucacileyo malunga nento oyenzayo. "UPetereter Heerden wabulawa, oko kuthetha ukuba kukho amehlo kunye neendlebe kuyo yonke indawo. Uluhlu luyingxenye ebalulekileyo yomsebenzi wengqondo. Ngaba undilandele? '"
(UHenning Mankell, i -White Lioness , idluliselwa nguLaurie Thompson. I-Press Press, ngo-2011)
I-Side Lighter ye-Red Herrings
"'Kuthiwani ngeHerring Herring, mama?'
"'Andiqinisekanga. Ngaba i-Red Herring i-Herring i-redring?
"'Okanye mhlawumbi inyaniso ukuba ucinga ukuba i-Red Herring ayilona i-herring ebomvu yinto eyenza i-Red Herring ibomvu ilandele konke.
"'Sithetha iingongoma ezibalulekileyo apha.'"
(Jasper Fforde, Omnye weeLona zethu aphuthiyo .Viking, 2011)
Ziziphi iiNdawo eziqhelekileyo?
Yenza i-Post Fair Fair okanye I-Display
Iingcebiso ze-Ski ze-Skied Advanced
Ngaba Uyongeza i-Acid kwiManzi okanye kuManzi ukuya kwi-Acid?
I-Declaration of Independence yase-Venezuela ngo-1810
Ukuphuhlisa iSicwangciso soPhando seSifundo soPhuhliso lwabafundi
Lindani, Yintoni? I-15 ye-Funniest Bad Lip Readings kwi-YouTube
IziNgesi ezisisiseko zesiNgesi zexesha kunye nendawo: Ngelo, ngo-On, no-